Iindaba - Yeyiphi eyona ntengiso iphambili yeemveliso zecarbide ye-tungsten?
Iintambo zeCarbide ezinomngxunya opholileyo
Iintambo zeCarbide ezineeHole ezimbini zeHelix
Solide khabhayithi End Mills
Ukufakwa kweCarbide Carbide
Ii-Discs ze-Tungsten Carbide kunye ne-Saw Blades
Tungsten khabhayithi Elungiselelweyo Izahlulo
Yeyiphi imarike ezintathu ezinkulu zeemveliso ze-carbide ze-tungsten?
Yeyiphi imarike ezintathu ezinkulu zeemveliso ze-carbide ze-tungsten ngoku? Amalungu e-alloy anzima ahlala kwezithuthi, kwezonyango, kwimarike yamandla amatsha, uyayikholelwa? Ngaba uyazi? Nceda undazise namhlanje.
Isetyenziswa ikakhulu kwicandelo lezithuthi. Emva yokubumba, sintering, intsimbi okanye ingxubevange olungumgubo kunye nezinye iinkqubo ukuvelisa amalungu khabhayithi ngesamente esetyenziswa kwimizi-mveliso eyahlukeneyo. Emva kweminyaka engama-70 yophuhliso, iinxalenye khabhayithi nesamente ziye zaphuhliswa ngokuthe ngcembe endaweni iinxalenye yentsimbi uphose ngamandla asezantsi kunye neepropati elula elula ukuba babe nako ekubunjweni nasekuqiniseni iinxalenye ngamalungu amandla aphezulu kwaye babe endaweni efanelekileyo machining okanye eyahlulayo iinxalenye.
Umzi mveliso osezantsi wekhabhayithi enesamente unokuba ngamalungu eemoto, iinxalenye zesithuthuthu, izixhobo zecompressor kunye nezinye izinto, ngokwembono yecandelo leesabhoratri zecarbide zomatshini wehlabathi, eyona ntengiso inkulu yokuthengisa iimveliso zearbide yishishini leemoto, itekhnoloji yesikhabhayithi esimiselweyo iindawo, ezona mfuno ziphezulu zentengiso.
Indawo yokuGcina i-Carbide Endmill, Ikhabhayithi eqinisiweyo, Izixhobo zeCarbide, IiMills eziQinisekileyo zeCarbide, Umatshini wokusika, Izixhobo zokusika iCarbide,